Theatre "jester" onodoli - lokhu ingenye yezindawo ezinkulu e Voronezh, lapho ungakwazi ukujabulela njengoba ingane futhi omdala.
Umsebenzi wakhe indawo ekuqaleni kuka-October, okude-1925, ngesikhathi eduze eyunivesithi yendawo iphuzu kokuqala. Okokuqala Voronezh State Puppet Theatre "jester" iqoqo abathandi, abalandeli kwezobuciko kweqiniso. Nokho, ngo-November 1930, le ndawo isibe omunye ezingxenyeni uMnyango ensimini imfundo, kwathiwa exhunywe yaseshashalazini abasha.
izishoshovu Young kwakhiwa qembu ngesikhathi inhlangano inyuvesi, ababezikhiqiza repertoire yamakhonsathi. Ngesikhathi esifanayo N. Bezzubtseva, induna indawo, baboshwa mhlaka-"Uma kwenzeka Academic". Kusukela ngo-1934, umholi kwaba Boris Nikolsky.
Imisebenzi okwenzeka ngaphakathi kwezindonga isikhungo okukhulu. abadlali nethimba babe 5 abesifazane futhi amadoda 2. Lapha kwakunokwenzeka ukwethula izingane kwezahlakalo emangalisayo zezwe imisebenzi odumile njenge "Little Red Riding Hood" futhi "Puss e Boots."
Voronezh Puppet Theatre "jester" waba igubha iminyaka wamashumi amahlanu ngo-1975. Khona-ke kwaba khona umbono ukunikeza inhlangano isakhiwo ayo, lapho bangaba khona ngokuzimela. Nakuba empeleni yaseshashalazini "jester" onodoli wathuthela esakhiweni lalo kuze 1984.
Architects waqala N. Topoev futhi Frolov. Ukuze ekuqalisweni kwalolu hlelo, bathola umklomelo okhethekile kazwelonke. B. Anischev wayengomunye walaba eziqakathekileko kakhulu, kodwa okungenani wonke umuzi ngenkuthalo isebenza Puppet Theatre "jester" (Voronezh) sokuqhuba amandla egcwele.
Ekupheleni kwekhulu leminyaka elidlule, ubuholi wathatha VA Volhovsky. Udlale lapha, "Icala Joan of Arc" wombhali Bresson futhi "umfana Naughty" P. Vezhinova. Ukusebenza zanakekelwa ngayo injabulo, kwaba umkhuba fresh empilweni yobuciko. Lapha ungabona okwengeziwe "Dead Imiphefumulo," noma "I ijazi", ukukhiqizwa "Ecce Homo" futhi "Ukudlondlobala Arturo Ui".
Futhi Puppet Theatre "jester" baziwa kakhulu ngokusebenzisa eziningi emikhosini emikhulu emhlabeni jikelele. It wakwazi ukubonisa ikhono troupes wendawo phesheya, ikakhulukazi eBulgaria, lapho umklomelo sizuziwe ngaphansi kwegama "Golden Dolphin". Ngo-2009, Puppet Theatre "The Fool" kwaba igama omunye umholi walo - Volhovsky.
Izimpendulo mayelana nomsebenzi ngaleso
Izivakashi itjheje izinga okusezingeni uboniswa ezindongeni ukusebenza isikhungo kanye productions. Deserve aphakeme indumiso nobuhle bendawo langa, zokubhukuda wenziwa eziwubukhazikhazi, izesekeli zikanokusho ukuthi ekhiqizwa ngokusebenzisa kwangaphakathi kanye nokulethwa kwezinye izinhlangano. Ngenxa ukuthuthukiswa ngokushesha kakhudlwana nokuningi ikhangwa Puppet Theatre "jester". Umlando yaseshashalazini lapho abantu benesithakazelo engengaphansi kwengu-magic olukhethekile lokusungula ukuthi okungase kuthintwe ngaphakathi kwezindonga zawo.
Wizadi futhi kudala namathuluzi abasebenza esiteji, izindlela ezikhethekile kanye namadivayisi, imishini ukukhanyisa, kanye zezinqubo ukukhiqiza kabusha umbala umculo. Ngaphezu kwalokho, wanikeza iseluleko, izinkulumo, eyenziwa befundisa futhi inqubo yokufunda. Abasebenzi sphere waseshashalazini ukwandisa amakhono abo lapha.
amaqembu ekuticambela abadlali ukuchitha uhambo ongenakulibaleka. Kudayisa amathikithi futhi akhiwe, izethameli kunikezwa eziningi namasevisi ahlobene. Imisebenzi ulethe injabulo enkulu kubo bonke ababelindele wanquma ukuvakashela kule ndawo yokudlela emangalisayo.
Lapha ungakwazi iqhaza izindwendwe kanye nezenzakalo uhlamvu mass. Phakathi ikhefu, kungenzeka ukuvakashela lezitsha emangalisayo.
Abaningi Voronezh ucingo kule ndawo yaseshashalazini abawuthandayo. Eqinisweni, izingane hhayi kuphela nijabula lapha, kodwa futhi inani elikhulu abadala. umqondo ukusebenza yayingase ibizwe ngokuthi ezidabukisayo nefilosofi. It has uhlaziye eziningi zengqondo, ukuvela zengqondo entsha kubantu.
Ngaphezu kwalokho, abadlali kukhona nje omkhulu, incazelo okuzikhulula ngokujulile ngakho baba ethengekayo, futhi singanqotshwa imizwelo ezicashile kanye imizwa ukufinyelela izinhliziyo zezilaleli.
Izipikha begqoke izingubo ezenza kakhulu efana onodoli. Ngenxa umsebenzi isikhathi eside futhi kanzima kule sayithi esizifundile emazweni amaningi phesheya. Nice ukubona lapha, hhayi kuphela esiteji kodwa futhi, sonke isakhiwo, ingaphakathi, egumbini ngalinye ngenxa yobuhle esiyingqayizivele zabo, obugagu nokuzilungisa. Kuyathakazelisa uvakashele emangalisayo Museum of onodoli, egcwele ziphephile emangalisayo, lapho esikhathini esidlule yasetshenziswa ngesikhathi ukusebenza kanye productions. Abantu abaye bavakashela lapha, bathi amanani ziyiqiniso, izindleko amathikithi buyafaneleka.
isikhumbuzo esithinta inhliziyo
Abantu abaningi bakholelwa kufanele ukuthi kuyindlela engcono kakhulu yokusebenzisa isikhathi khulula - ukuvakashela Theatre "jester" onodoli, okuyinto ikheli: Voronezh, Revolution Avenue, 50.
Esinye isici ngempela emangalisayo kule ndawo kungenziwa ngokuthi isikhumbuzo, which busisa inja okuthiwa White BIM Black Indlebe. Yaqalwa ngo-1998 endaweni eduze isakhiwo. ukubaza abalobi kukhona E. Pak futhi I. Dikunov.
incwadi iqhawe komculo ukuphila yobukhulu bayo, isinyathelo singanikezwanga. Ungase uphawule ukuthi inja ukubukeka kabi futhi azinikele. Lokhu ebaziwe kwabathinta izinhliziyo eziningi. Indaba for the ukukhishwa lesikhumbuzo kwaba insimbi engagqwali. Bronze ekhiqizwa indlebe kanye isidladla.
Isithombe elimangalisayo G. Troepol'skaya ubuqambi waba uphawu lokuhlala komakhelwane nalo isikhungo ezigcawugcawu. Phakathi ukudalwa ababhali ebaziwe sathatha iseluleko kusuka umbhali kuboniswane naye lesikhumbuzo wafika eduze ngangokunokwenzeka ukuze ukuklanywa kanye emelela engcono zezici zalo. Nokho, umdali nalapho afike ashonela khona ngaphambi kuvulwa eziqoshiwe.
Lokhu yaseshashalazini yayiyindawo lapho ungafunda okuningi, futhi Ukuncoma ubuhle enkulu eklanywe ngokuhlakanipha ngayo. Kuyinto ithempeli lapho ukuze uphumule futhi kungenziwa bondliwa ne imizwelo eyakhayo komphefumulo. Singasho Kunconywa ukuba wonke umuntu kusuka zingaphansi kwabantu abadala.
Kanjani ukuze uthole Pereslavl kusuka eMoscow zonke izindlela ezingakhona
Iziphuzo eziphansi kakhulu neziphuzo zabo. Ukulimaza iziphuzo eziphuza kakhulu